China TY160-3 Bulldozer Mugadziri uye mutengesi | Xuanhua
TY160-3 bulldozer is semi-rigid, power switch, power assisted controlling, mutyairi hydraulic inoitisa inodzorwa, iine lever imwechete inodzora mapuraneti gearbox. Iyo ine yakasarudzika kabhini, yazvino tambo yakagadzirirwa zvikamu zvekuvhara uye inosimbisa yekupedzisira drive
TY160-3 bulldozer is semi-rigid, power switch, power assisted controlling, mutyairi hydraulic inoitisa inodzorwa, iine lever imwechete inodzora mapuraneti gearbox. Iyo ine yakasarudzika kabhini, yazvino tambo yakagadzirirwa zvikamu zvekuvhara uye inosimbisa yekupedzisira drive. Inoita yakakwira kugadzirwa kushanda, zvirinani kufamba kugona, nyore kushanda Inoita nyore kugadzirisa pamutengo wakaderera nekuda kwechimiro chakareruka ne6pcs track rollers. Iyo yakanaka bulldozer inoshandiswa mumunda wemafuta, kudyara kwemarasha, nharaunda sisitimu nenzvimbo isina kutsarukana etc.
Kushanda kwehuremu (kusanganisira ripper) (Kg): 16800
Kumanikidza kwepasi (kusanganisira ripper) (KPa): 65.6
Nzira yekuyerera (mm): 1880
Min. clearance yepasi (mm): 400
Kudonha kugona (m): 4.4
Nereza upamhi (mm): 3479
Zviyero zvese (mm): 514034793150
Rudzi: Weichai WD10G178E25
Flywheel simba (KW / HP): 131
Rated peturu yekushandisa (g / KWh): 200
Iyo sprocket yakakwidziridzwa yakasununguka yakaturikwa: 6
Huwandu hwevanyengeri vanofamba (rumwe rutivi): 2
Pamberi (Km / h) 0-3.29 0-5.82 0-9.63
Kudzokera (Km / h) 0-4.28 0-7.59 0-12.53
Shanduro kuburitsaL / min: 170
Pashure: TY165-3 Bulldozer
Zvadaro: SD6N Bulldozer